Fambara ny fahaketrahana aorian'ny fisarahana | Bezzia
Ny iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra mety hitranga aminao amin'ny fiainana dia ny fisarahana amin'ny olon-tianao. Misy ny olona mahavita mamadika ny pejy haingana, na izany aza misy olona hafa izay mahita fa sarotra ny manaiky ny zava-misy vaovao ary miditra anaty fahaketrahana lalina nefa tsy dia mahatsapa azy akory.
Mba hisorohana an'izany dia zava-dehibe ny fahalalana ny fomba fampiasana ny alahelo noho ny fiatoana voalaza ary miezaha mamerina ny fiainana isan'andro amin'ny fomba mahasalama indrindra.
1 Inona avy ireo soritr'aretina milaza fa mijaly amin'ny fahaketrahana diso fanantenana ilay olona
2 Inona no hatao raha kivy ianao noho ny fisarahana?
Inona avy ireo soritr'aretina milaza fa mijaly amin'ny fahaketrahana diso fanantenana ilay olona
Ny fiatoana rehetra dia sarotra sy sarotra satria tsy lovia tsiro, manao veloma amin'ny fomba voafaritra tsara amin'ilay olona tianao. Raha sendra fijaliana noho ny fahaketrahana dia zava-dehibe ny fahafantarana ireo soritr'aretina isan-karazany ao aminy mba hikarakarana azy amin'ny fomba tsara indrindra.
Raha misy ny soritr'aretina izay manondro ny lafiny ara-pientanam-po dia izao no tokony hambara:
Mahatsiaro ilay olona tsy firaikana sy alahelo isaky ny mandeha.
Ankoatra ny alahelo voalaza etsy ambony dia misy fihetseham-po hafa miseho toa ny fahatezerana na hatezerana izy ireo.
Mety hahatsapa ilay olona toy ny meloka fa vita daholo ny zava-drehetra.
Ny fahatsapana tahotra Miatrika tsy mahita olon-kafa ho raiki-pitia.
Misy tsy fahampian'ny antony manosika ary kely faniriana handroso.
Ankoatry ny soritr'aretina ara-pientanam-po dia misy soritr'aretina kognitika hafa izay tsy maintsy resahina:
Mihodina hatrany ny lohan'ilay olona ny fomba hamerenana ilay olona tianao.
Mandritra ny fotoana rehetra dia misy eritreritra an-tsainao an-tsaina Inona no azoko natao mba hisorohana ny fisarahan-toerana mahatsiravina.
Izany rehetra izany dia mahatonga ny olona mijaly amin'ny fahaketrahana tsy hanao asa any am-piasana sy mirona hanidy tena amin'ny tontolony manokana izy.
Amin'ny tranga sasany, lehibe ny olana ka eritreritra mamono tena.
Inona no hatao raha kivy ianao noho ny fisarahana?
Raha misy ny porofo manamarina fa mijaly amin'ny fahaketrahana ny olona noho ny fisarahana, dia zava-dehibe ny fanarahana torohevitra vitsivitsy:
Ilaina ny fananana ny fanampian'ny olona matihanina na olona akaiky afaka mandresy ny famoizam-po toy izany.
Na dia mety ho mafy aza izany amin'ny voalohany, zava-dehibe ny hahafahana manapaka ny fifandraisana rehetra tamin'ny lasa.
Ny fandalovana ilay duel no zava-dehibe raha hanaiky ny fialan-tsasatra. Aza mangina ary asehoy ny fihetsem-po rehetra ilaina.
Ilaina ny maka sary an-tsaina amin'ny tontolo antonony sy maharitra, mba hametrahana tanjona sy tanjona marobe izay mampientam-po ny fiainana aorian'ny fisarahana.
Raha fintinina, fahita amin'ny fahaketrahana aorian'ny fisarahana dia mahazatra sy mahazatra. Ilay olona dia tsy tokony hijanona amin'ny vatofantsika amin'ny zava-misy ary afaka miaina fiainana ara-dalàna tsikelikely rehefa mandeha ny fotoana. Ny fananana fanampiana dia fanalahidy ary ilaina mba hahafahanao misaona noho ny fiatoan'izy mivady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Soritr'aretin'ny famoizam-po aorian'ny fisarahana
Inona no mitranga raha misintona volo fotsy ianao